Tọzdee, Septemba 30, 2021 Tọzdee, Septemba 30, 2021 Douglas Karr
Nyaahụ, mụ na ndị isi ụlọ ọrụ mpaghara nọ, anyị na-atụlekwa ụfọdụ mpụga. Offọdụ usoro a chọrọ ga-achọ ụfọdụ ndekọ ndekọ ka emelitere, yabụ ajụrụ m onye nwere ike ịbanye na ụlọ ọrụ DNS. Enwere ụfọdụ ihe ọhụụ, n'ihi ya, m mere ngwa ngwa Nlegharị anya ndị na GoDaddy iji mata ebe e debara aha ngalaba ahụ na ndị edepụtara aha ha.
Mgbe m hụrụ nsonaazụ ya, ọ wụrụ m akpata oyi n'ahụ. Azụmahịa ahụ emeghị n'ezie nke ndebanye aha ngalaba ha, ụlọ ọrụ ha na -arụ ọrụ mere.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ imelite ntọala ndebanye aha ngalaba gị maka nyiwe ndị ọzọ ị ga -ejikọ? Ị ga -eme ya kwụọ onye nke atọ gị ụgwọ imelite ihe ị kwesịrị inwe? Ụlọ ọrụ a mere n'ezie… ụlọ ọrụ ahụ na -anakwa ha ụgwọ karịa ndebanye aha ngalaba na -eri kwa afọ!
Gịnị ma ọ bụrụ na ndebanye aha ngalaba azụmahịa gị emebie? Anyị ahụla ka nke a mere na ụlọ ọrụ ahụ ga -ama jijiji iji chọpụta onye nwe akaụntụ ahụ wee megharịa ndebanye aha tupu onye ọzọ edebanye aha ya.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ịgba ụgwọ esemokwu ma ọ bụ arụmụka iwu na ụlọ ọrụ edepụtara dị ka onye na -edebanye aha ngalaba gị?
Gịnị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ edepụtara dị ka onye na -edebanye aha gị na -aga enweghị azụmahịa ma ọ bụ akụ ha na -ajụ oyi?
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ edepụtara dị ka onye na -edeba aha gị gbanyụọ adreesị ozi -e nke edepụtara dị ka onye nwe ngalaba ụlọ ọrụ gị?
Ọ dị mma… nke ọ bụla n'ime nsogbu ndị a nwere ike ibute gị nsogbu! N'ihe atụ a akọwapụtara, onye ahịa m etinyela nde kwuru nde na akara azụmaahịa ha na ikike ngalaba ha n'ịntanetị n'ime iri afọ abụọ gara aga. Ọnwụ nke ahụ ga -emetụta azụmahịa ha nke ukwuu - iwetu ihe niile site na email ụlọ ọrụ ha gaa ọnụnọ ha n'ịntanetị.
Njikwa ngalaba gị kwesịrị mgbe a ga -enyefe ya n'aka onye ọzọ… gụnyere ụlọ ọrụ IT ma ọ bụ ụlọ ọrụ mpụga. Dịka na ị gaghị ekwe ka ndị ọzọ nweta mgbazinye azụmaahịa gị ma ọ bụ nnyefe ụlọ gị, ndebanye aha ngalaba gị bụ nke gị!
Etu ị ga -esi jiri Whois lelee ndebanye aha ngalaba gị
Whois bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndebanye aha ngalaba niile nwere ebe ị nwere ike lelee ma ọ bụ nwee mmemme nke ọma na ngalaba. Buru n'uche na ọ bụghị ozi niile bụ nke ọha. Ụlọ ọrụ nwere ike nye akara nke ha dịka nkeonwe. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na iji Whois lelee ozi ngalaba gị, ị ga -enwe ike ịkọ ma ọ dị na akaụntụ ndebanye aha ngalaba nke ị nwere (dịka. GoDaddy), ma ọ bụ ọ bụrụ na ịmaghị azụmahịa ma ọ bụ onye na -edeba aha… bido nyochaa onye na -eme ya.
Nke a bụ nlele Whois nsonaazụ:
Nsonaazụ ọchụchọ nke WHOIS Aha ngalaba: martech.zone Ndenye aha ndekọ: 83618939503a4d7e8851edf74f2eb7d0-DONUTS Onye na-edeba aha WHOIS: whois.godaddy.com URL na-edeba aha: http://www.godaddy.com emelitere ụbọchị: 2019-05-15T19: 41: 47Z Creation Ụbọchị: 2017-01-11T01: 51: 30Z Oge ngwụcha ndebanye aha ndebanye aha: 2022-01-11T01: 51: 30Z onye na-edeba aha: GoDaddy.com, LLC na-edeba aha IANA ID: 146 Onye na-edeba aha onye na-edeba aha Kpọtụrụ Email: abuse@godaddy.com Onye na-edeba aha na-edeba aha. Ekwentị: +1.4806242505 Ọnọdụ ngalaba: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Status Domain: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdatePachibido Ọnọdụ Ọnọdụ: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientReep#client Ọkwa: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Registrant State/Province: Indiana Registrant Country: US Registrant Email: Họrọ kọntaktị onye na -ahụ maka ngalaba na https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone Email Email: Họrọ njikọ njide ngalaba njide na https : //www.godaddy.com/whois/results.aspx? domain = martech.zone Email Email: Họrọ njikọ njide ngalaba ịkpọtụrụ na https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone Onye nkesa aha: NS09.DOMAINCONTROL.COM Aha sava: NS10.DOMAINCONTROL.COM
Ọ bụrụ na ịchọta na azụmahịa ahụ, adreesị ozi -e (ma ọ bụ) ngalaba ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndebanye aha nke onye na -edeba aha bụ onye na -edebanye aha, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ IT nke i goro iji jikwaa DNS gị, mee ka ha gbanwee ozugbo. azụmahịa registrant na adreesị ozi -e laghachikwute gị ma hụ na ị nwere akaụntụ ndebanye aha ngalaba ebe edobere ya.
Buru n'uche, ndebanye aha ngalaba ọ bụla nwere kọntaktị dị iche iche ejikọtara nke ga -enye gị ohere ịnye ohere nke mpụga gị ma ọ bụ ikike ị nweta ọkwa na mgbanwe:
Ahụla m ka nnukwu ụlọ ọrụ na-efunahụ ngalaba ha n'ihi na ha amatadịghị na ọ bụghị ha nwe ha na mbu, onye ọrụ ọrụ ha nwere. Otu n'ime ndị ahịa m gbara akwụkwọ gaa ụlọ ikpe iji nweta ngalaba ha n'aka ha mgbe ịhapụchara onye ọrụ ka ọ laa. Onye ọrụ ahụ zụtara ngalaba ndị ahụ wee deba aha ha n’aha ya, n’enweghị onye nwe ụlọ ọrụ ahụ.
A sị na ha debere onye nwe ụlọ ọrụ ahụ ka ọ bụrụ onye na-edeba aha ma gbakwunye adreesị ozi-e nke ha nchịkwa na teknụzụ kọntaktị, m ga-akwado. Otú ọ dị, ha gbanwere n'ezie edebanye aha. Ọ dịghị jụụ. Ọ bụrụ na ha na-akwụ ụgwọ ma na-elekọta ha, ha gaara enwe ike ijikwa DNS ahụ ma lekọta ịgba ụgwọ na mmeghari ohuru. Ha adịghị mkpa ịgbanwe n'ezie registrant.
Iji mee ka o doo anya, anaghị m ekwu na ụlọ ọrụ IT a nwere atụmatụ ọjọọ. Ekwenyesiri m ike na ịchịkwa ndebanye aha nke onye ahịa m mere ka ndụ ha dịkwuo mfe. Mee elu mee ala, ọ nwere ike ịbụ na o mebiri oge na ume. Otú ọ dị, ọ bụ ihe na-adịghị anakwere ịgbanwe registrant email na akaụntụ ahụ.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka onye nke atọ jikwaa ngalaba gị?
Ọ bụrụ na onye na -edeba aha ngalaba gị anaghị enye atụmatụ ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike itinye ndị mmekọ ma ọ bụ ndị njikwa na ngalaba gị
Enwere oge ụlọ ọrụ chọrọ ka ndị ọzọ jikwaa ngalaba ha, yabụ nke a bụ ọrụ-gburugburu. Enwere m ụlọ ọrụ melite a adreesị ozi -e nkesa (dịka akaụntụ@yourdomain.com) na ha nwere ike tinye ma ọ bụ wepu adreesị email ndị ọzọ na. Nke a na -enye aka n'ọtụtụ ụzọ:
Ịnwere ike ịgbakwunye na wepu ndị na -ere ahịa dịka achọrọ.
A na -emelite onye ọ bụla nọ na ndepụta nkesa ma ọ bụrụ na enwere mgbanwe na akaụntụ ahụ (gụnyere mgbanwe okwuntughe).
Ndụmọdụ: Etukwala otu adreesị email onye nwe ngalaba gị aha ngalaba gị n'ezie! Ọ bụrụ na ndekọ ndebanye aha ngalaba gị gwụsịrị ma ọ bụ mgbanwe DNS gị, ọ ga -eme ka ọ ghara ikwe gị omume ịnweta ozi email! Ọtụtụ azụmaahịa nwere ihe karịrị otu ngalaba metụtara azụmahịa ha… yabụ depụta ndepụta nkesa akaụntụ n'otu ngalaba ndị ọzọ.
ITlọ ọrụ IT ka ga-akwụ ụgwọ maka njikwa nke DNS, mana ọ dịghị mkpa ka ịkwụghachi ha ugboro 3 ihe ndebanye aha ha. Ma, ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ enweghị ihe ize ndụ na ngalaba ha anaghị achịkwa ha!
Biko lelee aha ngalaba ụlọ ọrụ gị wee hụ na ikike ahụ dị n'okpuru akaụntụ na njikwa ụlọ ọrụ gị. Nke a bụ ihe ị kwesịghị ịhapụ ikike n'aka ndị ọzọ.
Tags: nweta ngalabangalaba aha ihe nkesa na-nzuzo ngalabandebanye ahagodaddyonye